Ithambile | January 2022
Lungisa le PC ayinakuqhuba Impazamo yeWindows 11
Ukulungisa le PC ayinakuqhuba Windows 11 impazamo, yenza i-TPM (Imodyuli yeQonga elithembekileyo engu-2.0), ukuseta imo yeBoot kwi-UEFI, kunye nokwenza ukuba iBoot ekhuselekileyo kwi-BIOS.
Uyilungisa njani iMifanekiso yeTumblr engafakwanga Impazamo
Lungisa imifanekiso yeTumblr engafakwanga Impazamo: Jonga uqhagamshelo lwe-Intanethi, Sebenzisa esinye isiKhangeli, Khubaza ulwandiso lwe-U-block, Sebenzisa iVPN, Jonga ukuba iiServer zeTumblr ziphantsi
Yintoni i-RAM? | Inkcazo yeMemori yokufikelela ngokungaqhelekanga
Yintoni i-RAM? I-RAM imele iMemori yokuFikelela ngokungaQhelekanga, luhlobo lokugcina olusetyenziswa yiCPU ukugcina idatha yangoku yokusebenza okwethutyana. Inokufumaneka
Sebenzisa iYouTube usebenzisa youtube.com/activate (2021)
Ukuzama ukwenza iYouTube isebenze kwi-Smart TV ngo-2020? Sukuba nexhala lokuba siza kudwelisa iindlela ezilula zokwenza iYouTube isebenzise i-youtube.com/activate. Sayina ungene ukuze usebenzise iYouTube
Uyenza kanjani ukuba isebenze iPluto TV: Cofa kuseto emva koko ucofe ukuSayina, ngoku faka iinkcukacha zakho. Cofa ku 'Bhalisa, kwaye iPluto TV yakho iyakwenziwa isebenze
Umahluko phakathi kwe-Outlook kunye ne-Hotmail? Ukwahlukana okubalulekileyo kukuba i-Outlook yinkqubo ye-imeyile ngelixa i-Hotmail yayiyinkonzo ye-imeyile ye-Webmail. Intsingiselo, imbonakalo
Ungazinyanzela njani ukuba ziQobe iiNkqubo zeMac ngeNdlela emfutshane yebhodi yezitshixo
Kukho amaxesha apho usetyenziso kwi-Mac yakho lungaphenduliyo kwimiyalelo yakho kwaye awukwazi ukurhoxisa ezo zicelo. Ngoku, awudingi ukuba noloyiko, ukuba udibana nemeko enjalo, nazi iindlela ezintandathu onokuthi uyeke ngazo umsebenzi okanye indawo okanye… Funda ngakumbi
Lungisa ayikwazi ukufaka uHlaziyo loMqhubi ngamava eGeForce
Ukulungisa akukwazi ukufaka uHlaziyo loMqhubi ngamava eGeForce: Khange ndikwazi ukuhlaziya abaqhubi bekhadi lemizobo le-NVIDIA ngamava eGeForce, yiyo loo nto
Yintoni i-Solid-State Drive (SSD)?
Yintoni i-solid-state drive? I-SSD okanye i-Solid-State drive sisixhobo sokugcina esingazinzanga esiyindlela entsha ye-HDD yemveli
Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi Windows 10
Ungavula ngokulula iifayile zeRAR ngaphakathi Windows 10 ngoncedo lweWinRAR okanye i-7-zip. Ezi zixhobo zigcinwa simahla kwiifayile zeRAR.
Izixhobo ezi-5 zeAmazon Tracker Izixhobo ezingama-2021
Ngaba ujonge ezona zixhobo zeAmazon Tracker zeZixhobo ze2020? Ukuba ulolu luhlu lwethu: Camel CamelCamel, PriceDrop, Keepa, Penny Parrot, Jungle Searc
Uyifumana njani iGoogle yokuKhangela iBar kwiScreen seKhaya se-Android
Ngaba ususe ngempazamo iwijethi yokukhangela kuGoogle kwiscreen sakho sasekhaya se-Android kwaye awazi ukuba uyibuyisa njani? Ukongeza ukuKhangela kuGoogle
Cima iAkhawunti yeGmail ngokusisigxina (Ngemifanekiso)
Ungayicima iakhawunti kaGmail ngokusisigxina ngaphandle kokucima iakhawunti yakho yonke kaGoogle, ngelixa usenakho ukusebenzisa ezinye iinkonzo zikaGoogle
Umahluko phakathi kweHotmail.com, Msn.com, Live.com kunye ne-Outlook.com?
Ngaba udidekile phakathi kweHotmail.com, Msn.com, Live.com, kunye ne-Outlook.com? Uzibuza ukuba ziyintoni kwaye zahluke njani omnye komnye? Ewe, unayo
Ungayithintela njani intengiso yeYouTube ngokucofa kanye
Vimba iintengiso zeYouTube ezicaphukisayo ngokuthenga iPremiyamu yeYouTube okanye uzame ukusebenzisa iAdblock yolwandiso lweYouTube okanye ujonge iYouTube ngaphandle kweentengiso kwiPeoplePure
Lungisa i-PlayStation Impazamo eyenzekileyo xa ungene
Ungayikhumbula njani i-imeyile kwi-imeyile?
Uyikhumbula njani i-imeyile kwi-Outlook? Enye indlela yokuKhumbula okanye ukutshintsha umyalezo kwi-Outlook kukulibazisa ukuthumela ii-imeyile kwi-Outlook.
Ungayenza njani iVidiyo yoBume beYouTube
Uyikhubaza njani i-DEP (uThintelo loPhumezo lweDatha) kwi Windows 10
Ungayicima njani i-DEP (uThintelo loPhumezo lweDatha): Ngamaxesha athile ukuthintela ukwenziwa kweDatha kubangela impazamo kwaye kwimeko apho kubalulekile ukuyicima kwaye kule
Ithetha ntoni i-Instagram Handle?
Umqheba we-Instagram ufana nesixhobo sokuchonga esikunika ubukho obukhethekileyo eqongeni. Ukuphatha kwakho i-Instagram kwahlukile kuwe.